पुरूष वेश्याकाे पिडा- प्रत्येक पटकको उफ्राईमा म्यामहरु शरीरभरी चिथोर्छन् — Sanchar Kendra
पुरूष वेश्याकाे पिडा- प्रत्येक पटकको उफ्राईमा म्यामहरु शरीरभरी चिथोर्छन्
हो , मैले भने ! हिड्नु भन्दै उ फर्कियो मैले उसलाई पच्छ्याए।
दोश्रो प्रश्न राख्नु अघि उसले रेडबुल र मैले कफी पिउने निदो गर्यौं मेरो चाहानामा । दुई वर्ष अघि उ यहीँ हामी बसेको क्लबको बाउन्सर थियो । एकदिन एक महिलाले रातको १ बजे रक्सि धेर पिएर बमिट गरिछन् । पछि घर पुर्याईदिनु भन्न थालिन । गाडीको लाइसेन्स भएको उ मात्र थियो
त्यसैले पुर्याउने जिम्मा उसैको भयो । दरबारमार्गबाट सानेपा पुगुन्जेल ति महिलाले उनको शरीरको विभिन्न स्थानमा स्पर्श गर्दा उनलाई गाडी चलाउन गाह्रो भएको थियो रे । जसोतसो घर पुर्याए अझ कोठा सम्म उनैले समातेर लगे र बेडमा राखे ।
बेहोसी महिला उनको छेउमा बसेकी थिइन् हात उनको तिघ्रामा राखेर । उनले आफु क्लब फर्कन ट्याक्सी भाडा मागे । अब भने महिला उठिन र एकोहोरो हेरिन । उनि रिसाइन् सम्झेर मैले पर्स बोक्न बिर्सेछु , पाँच सय भए पुग्छु उनले नम्र भएर भने ।
महिलाले हास्दै दराज बाट आधा बिटो पैसा निकालेर उनलाई दिईन् , उनी छक्क परे । शुरुमा समाएनन तर स्त्री र पैसाको अघि उनी झुके, पैसा गोजीमा राखेर हिड्न लागे । तर ति महिलाले उनलाई च्याप्प समातिन र खाटमा पल्टाइन । चल्न थालिन, चलाउन थालिन । उनले सम्झाउन खोजे , फुत्किन खोजे तर उनको केही लागेन अन्त्यमा उनी म्यामको तिर्खा मेट्न बाध्य भए ।
त्यो रात बिहानसम्म म्यामको रोजाईमा उनीहरु उफ्रिरहे । उठेर विदा माग्दा फेरी म्याम उनी सँग जिस्कन थालिन । कपडा खोलेर उनको अघि उभिईन् । उनि फेरी झुके क्लबबाट निस्केको करिब १८ घण्टासम्म म्यामले उनलाई आफ्नो कब्जामा राखिन , आनन्द लिइरहिन। तर उनको शरीर यता गलेको थियो पैसाको लोभले चुपचाप म्यामको चाहना पुरा गरे ।
त्यही दिनबाट सुरु भयो उनको यो व्यबसाय । त्यसपछि दैनिक उ म्यामको सेवामा हाजिर हुन्छ । राती १० बजे पछि बिहान ४ बजेसम्म उनले म्यामलाई समय दिएका छन् । म्यामको चाहानामा, रोजाईमा , म्यामले भने जसरी उनि प्यास मेट्दीन्छन् त्यो बापत मोटो रकम पनि लिन्छन।
कति जनालाई सेवा दिनुहुन्छ उनि मौन भएपछि म सोध्छु ?
फोन गर्नु भनेर उनि बुलेट बाईकमा हुइकिन्छन् । कालो फिटिङ टि सर्ट र सेतो पाइन्टमा रहेका उनको छाती माथी उठेको थियो , कसिलो ज्यान भएका उनि ठियाक्कै भन्दा फिल्मको नायक जस्तो नभएर गुण्डा जस्तो देखिन्थे । उनि सँग मात्र कुरा गरेर स्टोरी प्रकाशित् गर्नु एउटा कोणबाट मात्र हेरेको ठहरिन्थ्यो । त्यसैले मैले अरु अनुसन्धान पनि गर्ने निदो गरे। उनि सँग बाँकी कुरा अर्को भेटमा गर्छु सोचे ।
यो सबै तयार गरेपछी मैले उनलाई पुन भेट्न मन गरे उनले यो पटक भाउ नखाई हुन्छ भने । मैले सुरुमै यो पढेरै आउनु होला भनेर मेल गर्दिए । दोश्रो पटक भेट्न जाँदा उनले “एटिटयूड” देखाएनन्। म पुग्दा जुरुक्क उठेर हात मिलाए । मलाई त कथा पढे जस्तो लाग्यो उनि खुसी भएर सुनाउँछन्, म हास्छु मात्र । तिमीलाई मैले हप्काए पनि है उनि भन्छन् म अझै केही बोल्दिन । बिहे कहिले गर्नु हुन्छ नि ? म सोध्छु। गर्लफ्रेन्ड छिन् ,अब चाडै ।
उनलाई थाहा छ यो कुरा ?
अविवाहित, तर म्यामहरु चाहीँ सबै विवाहित हुनुहुन्छ । तपाईलाई मैले वेश्या पुरुष भन्दा कस्तो फिल गर्नुहुन्छ ? म आखिरी प्रश्न राख्छु।
हस् राजन जी म जान्छु समय दिनु भयो, आफ्नो कुरा सुनाउनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद । मलाई पनि खुसी लाग्यो कसैलाई नसुनाको कुरा सेयर गर्न पाए ।